Mabhomba maviri akarova guta reBeirut – Get up to 50% off when you buy multiple small stickers.
Mabhomba maviri akarova guta reBeirut
Musi waNyamavhuvhu 4, 2020, nzvimbo inosvika mazana maviri nemazana mashanu emakumi mashanu ematani eammonium nitrate yakachengetwa muchiteshi cheBeirut, Rebhanoni yakabatidza uye yakatanga kuputika kukuru kwakaparadza nzvimbo huru dzeguta rekare.
Kuputika kuviri, kwechipiri kwakakura kudarika kwekutanga, kwakarova guta reBeirut kutanga kweChipiri manheru, kwakauraya vanhu vanosvika zana nemakumi mashanu nevaviri, kukuvadza vanopfuura zviuru zvishanu uye zvichikonzera kukanganisa kwakapararira. Vanhu vanopfuura chiuru vakaiswa muchipatara, uye zana nemakumi maviri vanga vachiri mumamiriro ezvinhu akaoma neChishanu, sekureva kwegurukota rezvehutano reLebanon, Hamad Hassan.
Kuputika kwechipiri kwakaunza mvura zhinji, yakatsvuka pamusoro pechiteshi chengarava cheguta ndokugadzira masaisai anovhundutsa akapwanya girazi kwemakiromita. Zvisinei nekutsvaga kukuru, gumi nevaviri vachiri kufungidzirwa kuti vakashaika muguta, guta guru reLebanon, kumahombekombe ekumabvazuva kweMediterranean.
Sezvo zviremera zvinobatanidza zvakaitika, heino kutarisa kune zvatinoziva uye zvatisingazive.
Chii chakakonzera kuputika kwacho?
Chikonzero chaicho hachisati chazivikanwa, asi moto wakapisa imba yekuchengetera chiteshi nenguva dza6 masikati. Pakava nekuputika kuviri, kumwe kudiki kwakateverwa nemasekondi gare gare nokuputika kukuru kwakaparadza nzvimbo dzakazara dzeguta.
Tags: akiraall mightanimeapocalypsearabarabicbakugobakugoubeirutbeyrouthbnhaboku no hero academiaboomcalligraphycedarcitycutedekudubaiegyptemiratesexplosionfairrouzfirefunnyhabibiheroiraqishe kuputika kuurayaizukujapanjordankacchankatsukikatsuki bakugoukonosubakuwaitlanguagelebaneselebanonmangameguminmhamiddle eastmidoriyamimhanzimoroccomy hero academianostalgiaqatarquotesredretrosaudi arabiasyriatypographyuaevintage
June 13, 2022 by admin Shona 0
Next بيروت شهر ۾ هڪ ڌماڪو ٿيو
Previous Liqhomane tse peli li ile tsa otla toropo ea Beirut